Talata 08 Janoary 2019. – FJKM
Talata 08 Janoary 2019.
Fandalinana ny Boky 2 Samoela
2 Samoela 2.1-11
Kihon-dàlana vaovao no niseho rehefa nodimandry i Saoly. Inona no hatao?
1-Nanontany an’i Jehovah i Davida .
Raha ny seho tsotra toy izao no jerena dia fotoana tena fanararaotra ny toy izao ho an’i Davida. Ny mpanjaka efa maty , izy rahateo efa fanta-bahoaka . Tsy nandeha araka ny hevitry ny tenany anefa izy fa niera sy nanontany ny Tompo : hiakatra amin’ny tanàna iray any Joda ve aho, dia aiza? Fihetsika takiana hananan’ny mino ny toy izany amin’izay dingam-piainana rehetra hatrehiny.
2-Namitram-pihavanana koa izy :
Nitia an’iSaoly ny mponin’ny Jabesy matoa nanao vy very ny ainy naka ny razana. Tsy nataony tsinotsinona izany ka nilaza soa tamin’ireo izy sady nampahafantatra ny tenany . Fahendrena faka tahaka ny mankasitraka ny tsara vita symamitra-pihavnana amin’ny rehetra.
3-Nanangana mpanjaka i Abnera
Araka ny fanaon’ny olona dia ny zanaky ny mpanjaka nodimandry no mandimby azy . Izany no narahin’i Abnera ka azo niheverana azy ho ninia nikimpy teo anoloan’ny efa fandavan’ny Tompo an’i Saoly. Azo heverina koa fa ny fifikirany teo amin’ny seza maha-komandin’ny miaramila no nanampina ny sofiny tsy handre ny feon’ Andriamanitra nanendry an’i Davida.
‘Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-3